Maxaad ka Taqaan Gabalka Afdheer ee Degaanka Somalida Ethiopia? – Rasaasa News
Nov 24, 2011 Gabalka Afder ee Degaanka Somalida Ethiopia
Afder, November 24, 2011 [ras] – Gabalka Afder waxaa uu ka mid yahay sagaalka gabal ee uu ka kooban yahay degaanka Somalida Ethiopia. Waxaana uu gabalku ka kooban yahay 10 degmo iyo 102 tuulo.
Gabalku waxaa uu xad kala wadaagaa dhinaca bariga gabalka Gedo ee dalka Somaliya, dhinaca koonfur-galbeedna gabalka Bakool dalka Somaliya. Dhinaca Ethiopia waxaa uu gabalku xad la wadaagaa gabalka Libaan, gabalka Shabeele iyo degaanka Oromada.
Gabalka Afdheer waxaa uu ahaa furin dagaaladii isku xig xigay ee dhex maray Somaliya iyo Ethiopia. Laakiin, gabalku wuu ka nabad galay colaadii ay waday Jabhada ONLF 16 sano, waxaana uu ka mid ahaa gabalada nabdoon ee aan laga taageerin ururadii colaada kula jiray dawlada 1994 – 2010.
Gabalka Afder, waxaa hore magaalo madax ugu ahaan jirtay magaalada caanka ah ee Mooyaale, oo hada ka mida degmooyinka Oromada.
Dhinaca dhaqaalaha: Gabalka Afder waxaa uu hodan ku yahay dhaqashada xoolaha nool sida; geela, lo,oda, adhiga, fardaha iyo dameeraha.
Gabalka Afder waxaa mara wabiga weyn ee Ganaane, waxayna dadweynaha gabalku si aan joogto ahayn u tabcadaan dalagyada kala gadisan ee beeraha sida; masagada, galeyda iyo khudaar.
Waxaa kale oo gabalka laga soo saaraa cusbada nooca ugu qaalisan [god-cusbo] aduunka, ee laga sameeyo waxyaabaha korontada leh, taas oo loo dhoofiyo gabalada la dariska ah iyo dalka Somaliya.
Waxaa kale oo gabalka aad uga baxa noocyada xabagta sida; cadaada, mal malka, hadiga, fooxa cad iyo fooxa madow, qoodhiga iyo mawaha xabagtan oo iib gal ah laakiin si aan habaysnayn gabalka looga qaado.
Waxaa kale oo gabalku caan ku yahay noocyada malabka sida; malabka shinida iyo ka dhurdaha ee surta loo yaqaan.
Waxaa iyana gabalka aad uga baxa geedo qaali ah sida dacarta, qoodhiga iyo mawaha, tiiraha iyo geed casaha oo qaali ah laakiin qaarkood gabalka laga dhoofiyo.
In kasta oo aan baadhid rami ah lagu samayn hadana waxaa gabalka laga guraa dhagxaan badan oo qaali ah oo si tuuga ah gabalka uga baxa.
Waxaa jirta macadan dihin oo aan aqoon iyo hanti midna loo haynin in la soo saaro taas oo ah mustaqbalka dadweynaha gabalka iyo guudahaan degaanka.
In kasta oo aan si dhab ah loo hayn tiro koobta dadka gabalka degan hadana waxaa jirta qiyaas ay soo saartay hayada tirada ee Ethiopia, taas oo ah 639,653 ruux sanadkii 2010.
90% ayaa qiyaas ahaan lagu sheegaa reer miyaga 10% waxaa lagu sheegaa in ay yihiin dad degan degmooyinka gabalka Afder.
Gabalku wuxuu kaalinta 2aad ka galayaa horumar la,aanta sagaalka gabal ee uu ka kooban yahay degaanka Somalida Ethiopia.
Dadweynaha u dhashay gabalka Afder ayaan gude iyo dibad midna iyagu isku dayin ka qayb qaadashada horumarinta gabalka Afder, arintaas oo aad moodo in ay u dhaafeen kaliya dawlada degaanka Somalida Ethiopia,oo aan iyada laftigeedu dhamaystiri karin hawlaha badan ee ay dadweynaha gabalka u baahan yihiin.
Shaxdan hoose oo waxaanu ka soo xiganay hayyada tira koobka Ethiopia, ayaa qayb ka ah xoolaha nool iyo tirada dadka ku nool degmooyinka gabalka Afder